ဦးဧရာ အတွက် လူရွှင်တော် အသင်းဥက္ကဌ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀မ်းနည်းဖွယ် စာလေးရေး လာခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင် – Cele Posts
ဦးဧရာ အတွက် လူရွှင်တော် အသင်းဥက္ကဌ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀မ်းနည်းဖွယ် စာလေးရေး လာခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်
ပရိသတ်ကြီးရေ…..ဟာသ လူရွှင်တော်ကြီး ဒိန်းဒေါင် ကတော့ ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးပြီး ဘ၀အမောတွေပြေစေနိုင်တဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်….။ သူဟာ အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူလည်းဖြစ်ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေရော အနုပညာရှင် အချင်းချင်းကပါ ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပြီး လူရွှင်တော် အသင်းရဲ့ဥက္ကဌတစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဒိန်းဟာ ပရဟိတအလုပ်တွေ ကိုလည်း အားတက်သရော လုပ်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေပါ လက်ဖျားခါ ချီးကျူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ လူရွှင်တော်တွေ အတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦဧရာတစ်ယောက် ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဦးဒိန်းဒေါင်တစ်ယောက်လည်း ဖြည်မဆည်နိုင်အောင် ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေတာပါ….။
မကြာသေးမီကတော့ ဦးဒိန်းဒေါင်ဟာ သူ့ရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ လူရွှင်တော် အသင်းရဲ့ ဥက္ကဌတစ်‌ယောက် အနေနဲ့ ၀မ်းနည်းဖွယ်စာ လေးရေးလာခဲ့ပါတယ်။ “သို့…..ဦးဧရာဒီစာကို မဖတ်နိုင်းမှန်းသိပေမဲ့ကျွန်တော်ရေး လိုက်ပါတယ်….လူရွှင်တော်တွေလူတန်းစေ့နေနိုင်အောင် တိုက်နဲ့ကားနဲ့နေနိုင်အောင် လူရွှင်တော်တွေနေရာရအောင်…ကိုယ်ကြိုးမဖက်အနစ်နာခံပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လူရွှင်တော်တစ်ချို့ကိုယ်စားကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ လူရွှင်တော်တစ်ချို့လို့သုံးလိုက်လို့ဦးဧရာတမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်???တစ်ချို့ကတစ်ချို့မို့လို့ပါ????????????ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်အပါအဝင်လူရွှင်တော်တစ်ချို့ကတော့ဦးဧရာကိုလူရွှင်တော်လောကရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သေတမ်းစာမဖတ်ဘူး?ဘာလို့လဲသိလားလူရွှင်တော်အသင်းတည်တံ့သ၍ဦးဧရာနံမည်ကိုမမေ့ချင်လို့ပါ ဒိန်းဒေါင် လူရွှင်တော်အသင်း(ဥက္ကဌ)ရန်ကုန်” ဆိုပြီးရေးသား လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ဦးဧရာ အတှကျ လူရှငျတျော အသငျးဥက်ကဌ တဈယောကျအနနေဲ့ ဝမျးနညျးဖှယျ စာလေးရေး လာခဲ့တဲ့ ဒိနျးဒေါငျ
ပရိသတျကွီးရေ…..ဟာသ လူရှငျတျောကွီး ဒိနျးဒေါငျ ကတော့ ပရိသတျတှကေို ရယျမောပြျောရှငျအောငျ လုပျပေးပွီး ဘဝအမောတှပွေစေနေိုငျတဲ့ လူရှငျတျောကွီး တဈယောကျဖွဈပါတယျနျော….။ သူဟာ အမွဲပြျောပြျောနတေတျတဲ့ သူလညျးဖွဈပွီးတော့ ပရိသတျတှရေော အနုပညာရှငျ အခငျြးခငျြးကပါ ခဈြခငျအားပေးကွတဲ့ သူတဈယောကျလညျး ဖွဈပွီး လူရှငျတျော အသငျးရဲ့ဥက်ကဌတဈယောကျ အနနေဲ့လညျး ဆောငျရှကျနတောဖွဈပါတယျ။
ဦးဒိနျးဟာ ပရဟိတအလုပျတှေ ကိုလညျး အားတကျသရော လုပျလှနျးတာကွောငျ့ ပရိသတျတှပေါ လကျဖြားခါ ခြီးကြူးနကွေတာဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ လူရှငျတျောတှေ အတှကျစံပွပုဂ်ဂိုလျကွီး တဈယောကျဖွဈတဲ့ ဦဧရာတဈယောကျ ကိုဗဈရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသှားခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီဖွဈစဉျကွောငျ့ ဦးဒိနျးဒေါငျတဈယောကျလညျး ဖွညျမဆညျနိုငျအောငျ ဝမျးနညျးပူဆှေးနတောပါ….။
မကွာသေးမီကတော့ ဦးဒိနျးဒေါငျဟာ သူ့ရဲ့ Facebookစာမကျြနှာမှာ လူရှငျတျော အသငျးရဲ့ ဥက်ကဌတဈ‌ယောကျ အနနေဲ့ ဝမျးနညျးဖှယျစာ လေးရေးလာခဲ့ပါတယျ။ “သို့…..ဦးဧရာဒီစာကို မဖတျနိုငျးမှနျးသိပမေဲ့ကြှနျတျောရေး လိုကျပါတယျ….လူရှငျတျောတှလေူတနျးစနေ့နေိုငျအောငျ တိုကျနဲ့ကားနဲ့နနေိုငျအောငျ လူရှငျတျောတှနေရောရအောငျ…ကိုယျကွိုးမဖကျအနဈနာခံပွီးတိုကျပှဲဝငျပေးခဲ့တဲ့အတှကျလူရှငျတျောတဈခြို့ကိုယျစားကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ။ လူရှငျတျောတဈခြို့လို့သုံးလိုကျလို့ဦးဧရာတမြိုးမထငျပါနဲ့နျော???တဈခြို့ကတဈခြို့မို့လို့ပါ????????????ဘာပဲဖွဈဖွဈပါကြှနျတျောအပါအဝငျလူရှငျတျောတဈခြို့ကတော့ဦးဧရာကိုလူရှငျတျောလောကရဲ့ဘုရငျအဖွဈဂုဏျပွုသတျမှတျလိုကျပါတယျကြှနျတျောသတေမျးစာမဖတျဘူး?ဘာလို့လဲသိလားလူရှငျတျောအသငျးတညျတံ့သ၍ဦးဧရာနံမညျကိုမမခေ့ငျြလို့ပါ ဒိနျးဒေါငျ လူရှငျတျောအသငျး(ဥက်ကဌ)ရနျကုနျ” ဆိုပွီးရေးသား လာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျ ရပါတယျနျော။